थारु समुदायको सखिया, खिया, झुम्रा नृत्य देखि ठनवामा कुल डेउतालाई टीका [तस्वीर] « Janaboli
थारु समुदायको सखिया, खिया, झुम्रा नृत्य देखि ठनवामा कुल डेउतालाई टीका [तस्वीर]
थारु समुदायको सखिया, खिया, झुम्रा नृत्य देखि ठनवामा कुल डेउतालाई टीका सम्मका तस्वीर यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।
(रासस) थारु समुदायमा दशैं (डसिया) को अवसरमा नाचिने लटठहवा नाच बढयाताल गाउँपालिका८ मयुरबस्तीमा मादलको तालमा नाँच्दै । यो नाच मयुरको प्वाख बिशेष तरिकाले सजाएर कम्मरमा बाँधेर लटठीले मादलको तालमा नाच्ने गरिन्छ । यो नाच थोरै मात्र गाउँमा नाच्ने गरेको पाइन्छ । तस्वीर : मानबहादुर चौधरी, प्रदेश नं. ५, बर्दिया
दशैको अन्तिम दिन बिजयादशमीको अवसरमा थारु समुदायले ठनवामा कुल डेउतालाई टीका लगाउँदै । तस्वीर : प्रदेश नं. ५, बर्दिया
दशैंको अन्तिम दिन बिजयादशमीको अवसरमा थारु समुदायले भलमन्सासँग सामुहिक रुपमा टीका थाप्दै । तस्वीर : मानबहादुर चौधरी, प्रदेश नं ५, बर्दिया
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका३ जोनापुरमा दशैंका अवसरमा सखिया नृत्य देखाउदै थारु युवतीहरु । तस्वीर : राजेन्द्रप्रसाद पनेरु
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका३ जोनापुरमा दशैंका अवसरमा सखियामा हात मिलाएर नृत्य गर्दै थारु युवतीहरु ।
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका३ जोनापुरमा दशैंका अवसरमा सामुहिक रुपमा सखिया नृत्य गर्दै थारु युवतीहरु । नृत्य विभिन्न मुन्द्रमा देखाईने गरिन्छ ।
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका३ वडा कार्यालयले मङगलबार दशैंका अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकबाट टीका थाप्दै नगर प्रमुख दिलबहादुर ऐर ।
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका३ वडा कार्यालयले मङगलबार दशैंका अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा सखिया नृत्य गर्ने टोलीलाई सगुनका रुपमा नगद रकम हस्तान्तरण गर्नु हुंदै वडाअध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद चौधरीलगायत ।
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका३ वडा कार्यालयले मङगलबार दशैंका अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा झुम्रा नृत्य देखाउँदै थारु महिला । यस नृत्यमा एक जना महिलाले नृत्य गर्ने र अन्यले गीत गाएर सबैलाई रोमाञ्चित पार्ने गरेका छन ।